» नेपाल आईडलका उत्कृष्ट ६ जोडीहरु
नेपाल आईडलका उत्कृष्ट ६ जोडीहरु
२६ माघ २०७६, आईतवार २१:००
मकवानपुर, २६ माघ । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो नेपाल आईडल सिजन ३ मा उत्कृष्ट ११ प्रतियोगीहरु छानिएका छन् । उत्कृष्ट ११ छानिनुअघि गाला राउण्डको दोस्रो हप्ताको पहिलो प्रस्तुतिमा १२ प्रतियोगीहरुलई जोडी बनाएर प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । युगल प्रस्तुतिमा जोडी बनेका प्रतियोगीहरुलाई दर्शकहरुले पनि निकै रुचाएर कमेन्ट गरेका थिए । यस भिडियो सामग्रीमा कसको जोडी कस्तो रह्यो अनि को कति हिट भन्ने बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । तपाईलाई पनि कुनै जोडी राम्रो लागेको भए भिडियोमा कमेन्ट गर्नसक्नुहुन्छ । हेर्नुहोस् भिडियो–
बिहिबारको प्रस्तुतिमा पहिलो जोडीका रुपमा सिजन ३ का एकमात्र गोल्डेन माईक विजेता मेघा श्रेष्ठ र नेपाल आईडलको स्टेजमा तहल्का मच्चाउन सफल मिग्मा लामाले प्रस्तुति दिएका थिए । उनीहरुले उक्त प्रस्तुतिबाट ‘कोकाकोला अपलिफ्टिङ पर्फोमेन्स अफ द डे’ अवार्ड समेत प्राप्त गरेका छन् । बिहिबार युगल प्रस्तुतिमा यी दुई प्रतियोगीहरुको गायन प्रस्तुति उत्कृष्ट भएसँगै उनीहरुले उक्त अवार्ड जितेका हुन् । अवार्ड जितेसँगै मेघा र मिग्माले नगद २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । बिहिबार मेघा र मिग्माले कालिप्रसाद बासकोटाको आवाजमा रहेको ‘हेरिहन देऊ मलाई’ बोलको गीतमा उत्कृष्ट प्रस्तुति दिएका थिए । उनीहरुको रेस्पेक्ट प्रस्तुतिमा तिनै जना निर्णायक, विशेष अतिथि गायिका मेलन नेवारका साथै सहभागी र दर्शकहरुले स्टाण्डिङ अवेशन दिएका थिए । गीतका गायक, गीतकार तथा निर्णायक कालिप्रसाद बासकोटाले उनीहरुको भर्सनलाई उत्कृष्ट भर्सनको संज्ञा दिए । निर्णायकहरुले दुबै प्रतियोगीहरुको निकै तारिफ गरे । मेघा र मिग्मा दुबै जना उत्कृष्ट ११ को लागि छनौट भएका छन् ।
बिहिबारको दोस्रो जोडीका रुपमा झापाकी रचना रिमाल र कैलालीका कमल शोबले प्रस्तुति दिएका थिए । उनीहरुले उदित नारायण झा र दिपा नारायण झाको आवाजमा रहेको ‘फुलपाती भाकेर’ बोलको गीत प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरुको प्रस्तुतिमा सबै निर्णायकहरुले सकरात्मक कमेन्ट गरेका छन् । कमल र रचना दुबै जना उत्कृष्ट ११ मा प्रवेश गरिसकेका छन् ।
बिहिबारको तेस्रो जोडीका रुपमा बर्दिवासका किरणकुमार भुजेल र मकवानपुरकी स्वस्तिका ढकालले प्रस्तुति दिएका थिए । कालिप्रसाद बासकोटा र अस्मिता अधिकारीको आवाजमा रहेको ‘साली मन पर्यो’ बोलको गीत गाएका किरण र स्वस्तिकाको प्रस्तुतिलाई निर्णायकहरुले सकरात्मक कमेन्ट दिएका थिए । उनीहरुमध्ये किरण उत्कृष्ट ११ मा प्रवेश गरेका छन् भने स्वस्तिकाको नेपाल आईडल यात्रा उत्कृष्ट १२ बाट टुंगिएको छ ।
बिहिबारको चौथो जोडीका रुपमा मोरङकी सज्जा चौलागाई र बर्दियाका प्रविण बेड्वालले प्रस्तुति दिएका थिए । उनीहरुले निश्चल बस्नेत र मीना निरौलाको आवाजमा रहेको ‘काले दाई’ बोलको गीत गाएर स्टेजमा तहल्का मच्चाएका थिए । उनीहरुको दमदार प्रस्तुतिमा तिनै जना निर्णायक, विशेष अतिथि र दर्शकहरुले स्टाण्डिङ अवेशन दिएका थिए । निर्णायकहरु नै स्टेजमा उक्लेर नाचेपछि नेपाल आईडलको सेटमा तहल्का मच्चिएको थियो । उनीहरु दुबै यस राउण्डका रेस्पेक्टफुल पर्फोमर तथा रकिङ सिंगरका रुपमा गनिए । उनीहरु दुबै जना उत्कृष्ट ११ मा समेत प्रवेश गरिसकेका छन् ।
बिहिबारको पाँचौँ जोडीका रुपमा चितवनका केविन ग्लान तामाङ र पोखराकी ममता गुरुङले रोमान्टिक प्रस्तुति दिएका थिए । यी दुईको जोडी नेपाल आईडलकै सबैभन्दा रोमान्टिक जोडीका रुपमा देखिए । उनीहरुले सुगम पोखरेल र रजिना रिमालको आवाजमा रहेको ‘कस्तो हो यो’ बोलको गीत प्रस्तुत गरेका थिए । रोमान्टिक प्रस्तुति दिएका यी दुबै प्रतियोगीहरु उत्कृष्ट ११ मा प्रवेश गरिसकेका छन् ।
बिहीबारको अन्तिम जोडीका रुपमा पोखराका नेशन पुन मगर र मुस्कान रानाभाटले प्रस्तुति दिएका थिए । उनीहरुले हरकुलस बस्नेत र निकिता थापाको आवाजमा रहेको ‘उडायो हावाले’ बोलको गीत प्रस्तुत गरेका थिए । निकै नै रोमान्टिक प्रस्तुति दिएका यी दुबै प्रतियोगीहरु उत्कृष्ट ११ मा प्रवेश गरिसकेका छन् । आदरणिय दर्शकविन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा नेपाल आईडल सिजन ३ को विजेता को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाकम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।